खोर्सानी खादा हुने अनेक फाईदा र बेफाइदाहरु - ज्ञानविज्ञान
खोर्सानीलाइ हामि विभिन्न परिकार लगायत अचार पनि बनाएर खान्छौ। यसको प्रयोग सबैले आफ्नो स्वाद अनुसार गर्छौ । प्राय हामि स्वादको लागि खान्छौ तर यसमा थुप्रै किसिमको फाइदा रहेको हुन्छ,जुन हाम्रो स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक छ। रातो खोर्सानिले ग्यास्ट्रिकलाइ केहि हद सम्म कम गर्न मदत गर्छ ।
पिरोले शरीरलाई न्यानो बनाउँन मदत गर्दछ र साथै तौल पनि घटाउन मदत गर्दछ। तर विज्ञहरुले चिल्लो,पिरो नखान सल्हा दिदै आएका छन । चिल्लो तथा पिरो पेटमा समस्या आउने र अल्सर बनाउने साबधानी दर्शाउँदै आएका छन् । जुनै कुरापनि अत्याधिक मात्रामा प्रयोग गरेमा त्यसले हानि गर्छनै त्यसैले खोर्सानी पनि एकदमै बढी मात्रामा खादा पेटमा विभिन्न असर पर्छ ।
१. तौल घटाउँछः खुर्सानीले तौल घटाउन पनि सहयोग गर्छ । सन् १९९८ मा गरिएको एक अध्यनमा रातो खुर्सानीले मेटाबोलिजम बृद्धि गर्ने र शरिरको ऊर्जा छिटो उपययोग हुने जनाइएको थियो । रातो खुर्सानीले भोक घटाउने भएकोले तौल घटाउन प्रभावकारी मानिन्छ ।
२. कन्जस्टेसनबाट बचाउँछः पिरो खानेकुराले पिनासबाट हुने समस्याबाट जोगाउँछ । खुर्सानीले शरिरको तापक्रम बढाउने भएकोले फ्लुबाट जोगाउँछ । खुर्सानीले दम र ब्रोनकाईटिसबाट जोगाउँछ ।
३. चिसोबाट बचाउँछः खुर्सानीको विशेषता पिरो र तातो हो । यसले शरिरलाई चिसो हुनबाट जोगाउँछ । चिसो पेट फुलेको वा डम्म भएको छ भने खुर्सानी राखेका तरकारीले शरिरलाई फाइदा गर्छ ।
४. क्यान्सरसँग लड्ने क्षमताः सन् २००७ मा गरिएको एक अध्ययनमा खुर्सानीमा हुने क्युरकुमिनले क्यान्सरबिरुद्ध लड्न सहयोग गर्छ । नियमित खुर्सानी खाँदा प्रोटेस्ट क्यान्सर नहुने अध्ययनमा जनाइएको थियो । आम भारतीयमा प्रोटेस्ट क्यानसर नहुनुमा खुर्सानीको मात्रा बढी खानु हो ।
५. खाना पचाउन सहयोग गर्छः खुर्सानीले पाचन पक्रियालाई पनि सहयोग गर्छ । त्यही भएर कतिपय चिनियाँ औषधीमा केही मात्रामा खुर्सानी मिसाइन्छ ।
हरेक खानेकुराको फाईदा र बेफाईदा हुन्छ । तपाई खुर्सानी खान सक्नुहुन्छ भन्दैमा धेरै परिणाममा खानु हुँदैन । निश्चित परिणाममा भन्दा बढी खानु हुँदैन ।
# आवश्यकता भन्दा बढी खुर्सानी खाँदा ज्यान तात्ने, तालु तथा आखा पोल्ने र निद लाग्दैन । गर्मी हुने मानिसलाई फाइदा भन्दा बेफाइदा हुन्छ । खुर्सानीले मुख सुख्खा हुने, मानसिक रुपमा तनाब बढाउने र शौच गर्न गाहा्रे हुने, पेट पोल्ने लगायतका समस्या हुन्छन् ।
# ब्लड प्रेसर, कलेजोको रोग, डाबिटिज, किड्नी र मुटुको रोग छ भने खुर्सानी सेवन गर्दा साबधानी अपनाउनुपर्छ ।
# पेटको अल्सर भएका, पेटमा संक्रमण, बाथ रोगीले खुर्सानी खानु हुँदैन । त्यस्तै ज्वरो आउँदा, घाँटी दुख्दा, खोकी लाग्दा खुर्सानी खानुहुन्न ।
Don't Miss it ३१ लाखमा बिके दुई खरबुजा
Up Next जाँड रक्सी सेवन गर्दा हुने यूरिक एसिडबाट कसरी बच्ने ?